GANACSIGA KOREY IYO KAN KORAYA EE BAYDHABO | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	GANACSIGA KOREY IYO KAN KORAYA EE BAYDHABO
written by warsan radio 21/04/2018
Ganacsiga waa isha dhaqaale ee ay ku tiirsanyihiin 80o% Mushtamaca Soomaaliyeed maadaama uu noqday ganacsiga meheradda kaliya ee qofka hal abuurka leh uu ka samayn karo dhaqaale uu kaga bixi karo shaqo la’aanta iyo daruufaha nololeed eek a jira dalka Soomaaliya.
Kani waa wiil dhalinyaro ah oo mudoo markii uu u soo shaqeynayay dad kale kadib hadda bilaabay in uu samaysto shaqo isaga u gaar ah taasoo uu ku doonayo in uu ku gaaro halka ay joogaan kuwii uu shaqeynayay isagoo kaashanaya khibraddii iyo waayo aragnimadii uu ka dhaxlay ganacsiga.
Tani waa haweeneey aan kula kulamay suuqa Baydhabo, waxay iibisaa shaah, waxay ii sheegtay in ay ka biisho qooys oo ay ku maarayso dhammaan baahidooda sida cuno,waxbarashada caruurteeda iyo dawadooda, iyadoo ii raacisay in ay jeclaaan lahayd in samaysato ganacsi kan ka wanaagsan oo ay aad ugu han weyntahay.
Muqtaar mayaase waa maareeyaha xarunta lagu iibiyo electronigga ee Sahal, waxaa uu uu iaaga warbixiyay ganacsiga uu hayo halka uu marayo iyo sida uu yahay dhaqdaqaaqa ganacsi eek a jira Magaalada Baydhabo. Waxaa kaloo uu ku dhiiri galiyaya Ganacsatada waa weyn in ay taageeraan dhalinyarada ku soo biiraysa ganacsiga si ay qeeb uga noqdaan horumarinta ganacsiga iyaguna u noqdaan kuwo ku dhiirada in ay sameeyaan hal abuur berito qeeb ka noqonaya sare u kaca dhaqaalaha Dalka.
Ismaaciil saxafi waa dhalinyaro ka mid ah shaqaalaha Shirkadda batroolka ee Baydhabo Batrooliyam and Car wash. Waxaa uu kayahay madaxa maamulka xafiiska Maaliyada waxaa uu ka warbixinayaa xaruntan casriga ah waxyaabaha ay ku soo kordhisay Magaalada ee aan horay uga jikran iyo tirade dhalinyarada shaqda ka heshay markii la furay xaruntan ee manta ku heesta nolosha qooysaskooda ee shalay shaqo la’aanta ahayd.
Xarumaha casriga ah ee soo badanaya iyo dhalinyarada ku dhiirinaysa in ay samaystaan ganacsiyo yar yar waxaa ay tusaale u tahay in Baydhabo uu ka jiro ganacsi koray iyo ku soo karaya oo bilaaw ah, kuwaasoo yadadiilo galinaya ardayada ku hoowlan barashada ganacsiga iyo maarayntiisa oo runtii looga fadhiyo in ay soo klordhin doonaan ganacsi la jaanqaadi kara kan ka jiro caalamka oo ku dhisan xirfa iyo aqoon oo ah tan hadda ku hoowlan yahiin.
GANACSIGA KOREY IYO KAN KORAYA EE BAYDHABO was last modified: April 21st, 2018 by warsan radio